Waaheen Media Group » Maxaa Somaliland saboolka ka dhigay ? Qore:Axmed Aw Salawaad
Browse:Home Articles Maxaa Somaliland saboolka ka dhigay ? Qore:Axmed Aw Salawaad
Published by Waaheen Media on April 3, 2017 | Comments Off on Maxaa Somaliland saboolka ka dhigay ? Qore:Axmed Aw Salawaad
DalkanSomaliland waa dal hodan ku ah hanti same badan, oo bad kaluun Fatahaysa , dhul beereed balaadhan , xoolo tiro badan seddexda meesi ba ah ilaah siiyey. Ku dar hanti samaha dhulka hoostiisa ceegaaga ee ku duugan ootiro beelay. Dalkaa waxaas hantisame ah ilaahaydhigay ayaa dadkiisu sabool Yihiin oo gaajo iyo saxariir ku noolyihiin. Haddaba maxaa inoogu Wacan Saboolnimada raagtay ee ina regaadisay ee dunida xageeda hoos ka Hoosaysa Inna dhigay.? Jilaal ba jilaal muxuu iigu dhibayaa?Maxaa dhaqaale xumada Inna baday? Ma cadho eebaa inna cusktay,? Ma waxaynu curinaa Oo aynu gacmaheena ku goosanaa ? Maxaa innaga hortaagan inaynu Gaadhano barwaaqo iyo nolol badhaadhe sida dunida kale? Xogto waxay tahay oo meelena loo dhaafayn, oo cudurku hoganayaa uu Deegaan ku yahay, fadhiisinna ka dhigytay: Intuu maanku gaajaysanyahay guuli waa weli.Wixii raagaa ba way xumaadaan !) Haydii ahaa Xukumadda, Guurtida, wakiilada iyo Garsoorka Oo musuuq oo dhex jiifo .
B) Guurtidu 26 sanno ayay yuurureen ayagoo aan cid dooran, aqoon siyaasdeed Aan lahayn, Waa hoyga qabyaalda oo waxay meesha ku fadhiyaan magacyo Reereed. Talada ay keenaana waa gacan taag indho la,aan oo hunguriga Iyo caloosha ka daarma. Distoorka ma fasiran karaan oo in yar mooyee Waa loo akhriyaa. Waxaa la mid yihiin Dameerkii Kitaabka siday ee eebbe Ku tilmaamay kuwii loo keenay Tawaaradda ee qaadan waayey J) Wakiiladdu waxay 18 sanno oo kolba oo gabawga kale ee yuurura kolba u cusboonaysiiya, waxaanay ku yimaadeencod qabiil oo midna laguma dooranAqoon iyo maskax furnaan’, Sida guurtida ayay huguri la yuurur yihiinOo caqligu ma shaqeeyo ee calooshay wax ku gartaan.
Boqolkii 60%Waa caydhii Europe ee debeda ka soo qamaamay si ay u boobaan Halkan. Laxejeclo kuma jiro arrintii la horkeenaba falanqayn la.aan Iyo ka fiirsan oon danta dalka iyo dadka eegin ayay gacan taag miidamo Ah ku mariyaan. Waayo, ujeedadiisu waa dhameelka yar ee uu markaa Arkayo.
X) Madaxweyna waa kal dhaaf wuxuu marayaa sideed sanadood, Kii Horena
Ee Riyaale kal dhaafbuu ku tegay , raaagsitaa Uu ku raagayo kursiga madaxweynanidu
waa ta keenaysa inuu u qaatoInuu kursiga iska leeyahay oo loo doortay
inuu iska fadhiyo , oo isu dhigo inuu dadka iyo dalkaba leeyahay isnu dhalinrogu
Kelitalis.. Waa ta keenatayMadaxweynuhuHantida ummada xaraasho
marba meel iibinya ee inooga Dhigayaa horumar. Sicir barar, darxumo,
maamul xumo isagoo wakiilda qol ku raagga ah laaluusha
Oo barnaamijku doono kaga iibso dareenka dadnimo kaganaansixista
Wuxuu doono. Wixii Raagaaba way xumaadaan.
Kh) Wasiiradiisa waxay kor u dhaafeen 70 segeger oo qurbajoog
u badan, oo hungurigu cadyahay , soo boob tegay,
nolosha ka soo dhacay , meehanaab , derbi jiif ahaa
musuq ah Oon aqoon lagu soo xulin ee qabyaalad ku yimi.
Waxaa la yidhaa Wasiirkii reer hebel ,Wada professor bug ah,Af Shisheeye
Oouu hadalka ku badhxao ayaa uu aqoon ka dhigaa iyo gibil gaalad iyo
Bayd uu cunaa iskaga rooriyo qabliguna waa qalalanyahay.
2) Ganacsatada oo ku milamay xukuumadda:
Ganacsatadu waa cudur galay xukumadda oo dhiiriyey musuqmaasuqa.
Waxay fureen iibsashada hanti qaranka .dhulkiiDanta guud ,
wershadiii korantada. Kaydkii qaboojiyayaasha kaluunla.
Waxay samaysteenSuuq xidhasho( Monopoly) aygoo cidhiidhiyeen
ganacsiga yaryar oo sicir Jumaladda iyo tafaariiqda waxaba u dhaxayn.
Ganacsatada waaweyn waxay sababeen inay ganacsi kastoo cusub
Markay arkaan Ay boobaan oo suuqa ka saaraan ciddii fikradda
Lahayd. Tartan la’aan suuq ah ayay keenayaya inay ganacstada waaweyn
-Suuqa xidhaan ( market Monopoly).
3- Bangiyadii maalgashiga waa suuq xidhan ah( Monopoly):
Bangiyadii waxay noqdeen qaar aan hab wanaagsan oo maalgelin ah
Lahayn ayagoo sheeganaya Amaaho hab-dhaqan islaam oo 19% gaadhaya
Iyo xidhaadhayaal kale oo adag ayay kushaqeeyaan .
Waxay yidhaahdaan Maraabaxo oo ah macaash wadaag
Mukhaasaro majirto ( Khasaare wadaag ma jirto).
Hadda ogow waxaa lagu macaash wadaagayaa waa hanti Rahman
Ee qofka amaaha qaatay leeyahay . Markuu qofkii
Dani u geysaa uu tahli waayo inuu lacagta amaahda ah iska celiyo
Hantidiisii rahanka ahayd ayay ka xaraashaan oo bangigu lacagtiisii iyo dulsaarkii 19% ahaa
Ayuu qaataa oo marna khasaare maleh . Maxaa qoysas guri la.aan
Bangiyadii jabnaa ee 4% – 6% wadaadadaa hortaagan oo xukuumadda
Gacan saar laleh . Waxay ku dacaayadeeyaan waa Ribo, Waayo banigayda
Dahabshiil iyo Daara Salaam Ayey kan hore gacan saar laleeyihiin oo ah
( Financial MonopolY) , ka dambenaSamiyo ku leeyahiin.,oo tartankay diidayaan.
Qaadashada Dulsaarku wadaadka waa u xalaal dadka kalena waa ku xaaraan.
Dadkuna bangiyada ka jabanAyey amaahda ka qaadan lahaayeen.
Dugsi maleh qabyaaladi waxay dumiso mooyaanee:
Hab dhaqanka siyaasadda ku qotonta qabyaaladda waxaa ku dhisan xukuumadda
Somaliland . Madaxweynuhu waa qabiil , wasiiraddu waa qabiil , Guurtidu waa
Qabiil Xisbiyadu waa xisbiyo qabiil, xil dhibaanku waa Qabiil, Xilkasta waa qabiil
iyo eex reernimo. Aqoon iyo khibradda la tixgelinayaa majirto. Umadda aan
tixgelin aqoon meel ma gaadhayo.
Madax dhaqmeed tiro badan ayaa siyaasad fasaqay:
Xukuumaddu way dhiiri gelisaa waxay ku shaqaysataa Salaadiin iyo Cuqaal
Oo aan hab dawladnimo aqoon . Caail iyo suldaanka ayaa soo keena wasiirka
Oo ah wasiir u xidhan caaqilka ama wasiirka. Waxaad arkaysa Ph,D qof sita oo caaqil ama
Suldaan jiidayo si xil wasiir loogu dhigo , wasiirkaa qabiilka ahi waxaa uu xilka
U doontay dantiisa gaaban ee u gaarka ah ee qabiilka uu magacooda ku yahay
Wasiirka uma danynayo eewaa hulaab uun. Sidaasay ummadda loogu kala qoqobay
Qabiil, jifo,jibo iyo baho. Qalabka shaydaanka ee dadka kala xidhxiday waa
Madax dhaqmeedka uu gumeysigii adeegsan jirey si u maamul si dadban.
Qaadku waxaa inaga luma dhaqaale badan oo gaadhaya $ 700 Million sanadkiiba
Markaan lagu darin khrashka cudurada ka dhasha cunistiisa sida Kansarka,Waalida,
. Ku dar sicir Baraka ka dhasha Malyuun iyo shan boqol oo kun oojoogto looga
Saaro dalka oo Ethiopia malin kasta lagu soo iibiyo maadooriyaha qaadka.
Saboolnimo guud oo dalka oo dhan ah iyo qofqof ba wuu u waxayeeleeyaa,
Qaadka hadii dadka laga joojiyo waxay keeni lahayd horumar hadii hab maal
Gaashi loo habeeyo.
Etiopia lagulama gorgortamin inay ina qaadato kallunka oo aynu ku soo bedno
Lacagta qaadku fuuqsado sanad walba ee dhaqaalaheena curyaamiyey .
Qurba jooga hoogaanka qabtay wuu burburiyey dalka:
Qurba joogani, Soo qamaamee, xilka lagu qoray
Qiiro malahee, waa qaadhaab doono, oo qandi dheer bay,
Xoolhii qaranka , ay ku qaatee, .
B) Maanta madaxda dalka Madaxweynaha laga bilaabo
Oo isagu ba qurbajoog ah , 70ka Wasiir ooisgu magaacaabay
agaasiimayaasha guud, agaasiimayaashaWaaxaa , badhaasaabyada
iyo madaxda , wakiilada 60% qurba jooge, Hanti lunsiga aad ugumamay
oo aad u yaqaana qalin daraalaha.
T) Xisbiyada qaranka madaxdooda, gudiyada fulinta, Golayaasha
Dhexe iyo kuwa goboladu waa wada qurbajooge doonaya inu
Halkan xoolo ka boobaan. Tusaale waad arkaysaa wasiir qurbajoog
Ahaa oo lix bilood gudahood ku dhisanya guryo iyo fooqyo. Markii
Arrad ku yimi qurbahanna musqulaha ama weelka maydhe ka ahaa
Dalku joogi jirey ee uu ka soo hangagaaray isagoo diifaysan.
Qorshe horumar dhaqaaleh tan guud iyo tan gaar midna ma jiro:
Ma jir ma jiro mashruuc horumain dhaqlaale oo la sameeyey:
Xukuumaddu iyo golayaasheedu marna may hirgelin mashaariic
Horumarineed sida; Wershado wax soo saar ah, horumarin beeraha
Ah ama qaar kale. Bedelkedii waxay abuurtay sicir barar nugleeyey
Dhaqaalihii qaranka iyo qofka ba .Waa askarigii $80 kii wax u goyn
Waayeen ee saxarrirsan.
Codka waa bixiya daljoogayaasha , oo xaq u leh inay iaygu talada
Qabtaan waayo ayaa codka leh xogogaalna ah. Hangaggare qurbaa
Ka yimi talada faraa haka labaxo.
Halkan bay ka dhawdee tolkay way hagranayaa ye
DPW iyo Kirada Saldigga Mililtary dhaqaale ma keenin karaan .
Meeday dekeddii 440meter ahay, ee la sheegayey. Heshiisku
Ma wuxuu ahaa tan ah tii ila dhuuq oo hashaydan aan gudhin
Gu, iyo Jiilaal 40 sannadoo maal u sii carab dhergey , Ma doobaygii
Buuxaybaa dubay lagu dhamayaa, Horumarku ma Hasha Berberaa
Daaqdaa dubay lisaysaa,Lacagta ka soo baxda hadii si wanaagsan
loo maamulo oo laga daayo lunsiga iyo qaybsasha iyo qadhiidhka
2km ayaa lagaadhsiin Lahaa dhererkeeda wadadana lacagta ka
soo baxda ayaa lagu dhisiLahaa ilaa wajaale, Lacgta ka soo xerootana
dalkaa yeelan lahaa 100% weligaa horumarna lagu samayn lahaa
shaqo iyo sharafnaLaga heli lahaa.
Saldhigu waa belaayoy baydh oo nagu soo baydh:
Dagaalka carabta iyo Iraan u dhexeeye maxaan ugu gacan haadinyaa
Een ugu soo raray Somaliland .nabdu miyaanay barwaaqada la walaal
Ahayn. Carabku waa maxay wuxuu isaga soo fogeeyey colaadda ,
Carabku intee buu leegyahay? Belaayo aan kuu dhowyn looma
Qore:Axmed Aw Salawaad